ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ? သန္ဓေသား ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ? သန္ဓေသားဥဟာ သားအိမ်ထဲမှာရှိတာလား? ဒီလိုသွားနေချိန်မှာ သန္ဓေသားဥဟာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲနေသလဲ? အချင်းနဲ့ ချက်ကြိုးဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်တာလဲ? အချင်းနဲ့ ချက်ကြိုးဖြစ်လာချိန်မှာ သန္ဓေသားဟာ ဘယ်လောက်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ပြီလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမသုံးလမှာ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဒုတိယသုံးလမှာ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင် တတိယသုံးလမှာ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ?
သန္ဓေသားဖြစ်ပေါ်လာခြင်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ CHAT Room မှာ ဝိုင်းဆွေးနွေးမယ်။
ပြီးရင် သန္ဓေသားဖြစ်ပေါ်လာခြင်း နဲ့ပတ်သက်လို့ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးဖို့ ဒီပေ့ခ်ျကို ပြန်လာရပါမယ်။